Apple manamboatra endrika ny lalao video control ho an'ny iOS 15 | Vaovao IPhone
Apple manamboatra endrika lalao video Controller ho an'ny iOS 15
Ny lalao video amin'ny terminal misy fakan-tsary dia tena sarotra amin'ny fahazoana «tamberina» voajanahary. Efa zatra milalao knobs fanaraha-maso isika rehetra, saingy miova ny toe-javatra rehefa tonga eo amin'ny efijery finday ireo lalao ireo, ary ankoatry ny zavatra hafa dia mitana ny ampahan'ny efijery ny tanantsika.
Izay no nodinihin'i Apple tato ho ato, azontsika an-tsaina fa ny Apple Arcade dia nanana zavatra betsaka nifandray tamin'izany. Ankehitriny i Apple dia nanamboatra endrika ny mpanara-dalao horonantsary ho an'ny iOS 15 ary nametraka azy ho an'ny mpamorona, Hisy fiatraikany lehibe amin'ny katalaogin'ny lalao video iOS ve izany?
Ny fanavaozana dia ho araka ny hitanao amin'ny fisamborana ny faritra ambony. Manana «joystick virtoaly» roa heny amin'ny ankavia sy ankavanana isika, ary ny fifaliana havanana dia hisy bokotra roa, "A" sy "B" izay hanampy antsika hanararaotra ireo bokotra fanaovana hetsika. Na izany aza, farafaharatsiny amin'ireto sary voalohany ireto dia mbola hitako fa ny interface interface dia mbola manafika be loatra amin'ny efijery, mora very 30% ny atiny izay aseho amin'ny ankapobeny, izay mijanona ho amin'izao fotoana izao ny vato misakana lehibe tsy maintsy resin'ny mpandraharaha lalao video iOS ary ireo kosa dia navadika avy amin'ny sehatra hafa.
Hiankina tanteraka amin'ny mpamorona izany fa mahatratra ny lalao iOS 15 sy ny an'ny Apple Arcade. Tsaroanay fa ity "fanatsarana" ity dia hampiharina amin'ny iPadOS 15 ihany koa, satria ny fotony dia mitovy amin'ny an'ny iPhone. Toy izany koa, toa tsy hisolo tena revolisiona lehibe amin'ny fomba filalaovantsika ny iPhone io. Apple Arcade dia mbola tsy manome atiny satria nanana ny fanampim-panazavana farany isika roa volana lasa izay, mandao ny sehatra ve i Apple?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple manamboatra endrika lalao video Controller ho an'ny iOS 15
Ny fivarotana Apple sasany dia hamela ny fidirana tsy misaron-tava tsy ho ela
Namoaka ny tranofiara ho an'ny fizarana faharoa amin'ny "See" izay hanomboka amin'ny 27 aogositra